Kuzivikanwa Kunopihwa Kwauri, Simba Rinotorwa Newe | Martech Zone
Vhiki rino, ndakaita hurukuro inoshamisa nemumwe mudiki wandaishanda naye mumusika wekushambadzira. Munhu akapererwa. Ivo vaive nyanzvi muindasitiri ane makore ezviitiko zvinoshamisa. Nekudaro, ivo vaiwanzo kufuratirwa kana zvasvika pamikana yekutaura, kuraira, kana kutariswa kubva kuvatungamiriri.
Pazera remakore makumi mana, ini simba yakauya gare gare kupfuura vazhinji vevatungamiriri vanozivikanwa mukati mekutengesa nzvimbo. Chikonzero chacho chakareruka - ini ndaive mushandi anoshanda nesimba, aibudirira aigonesa vatungamiriri vemabhizinesi andakabatsira kuwana chiremera. Ini ndakagadzira indasitiri mishumo iyo yakazviita mumabhuku uye mharidzo huru ine zita ravo pairi. Ini ndakatanga mabhizinesi andisina kupihwa zita rekuti muvambi. Ndakatarisa apo vanhu vandakashuma kwavari vachikwidziridzwa uye vachibhadharwa zvakanaka, ini ndichivashandira zvangu. Vazhinji vavo vakapfuma.
Handisi kuvapa mhosva. Ndiri kuonga izvo zvandakadzidza ndichivatarisa. Muchokwadi, ini ndiri shamwari dzakanaka nevazhinji vavo nhasi. Asi pabasa rangu rese, ini ndaive ndakamirira kuve inozivikanwa sechiremera. Chidzidzo chekupedzisira chandakazodzidza mushure mekuvatarisa ndechekuti vakave zviremera nekuti havana kumbomirira kuzivikanwa. Vakatora masimba avo.
Usaturikire zvisizvo sekutora kwavakaita kubva kwandiri. Kwete, vakatora kubva muindasitiri. Kuzivikanwa hakuna kuuya pakutanga, kwakazouya mushure. Vakanga vasingamiswe mukuwana iwo mavara. Pakave nechiitiko chekutaura, vaitamba bhora rakaomarara kuti vawane nguva yakanakisa, uye vakave nechokwadi chekusimudzira… kunyangwe pamusoro pekusimudzira kwavo kubatikana. Pakave nekutaurirana kwepaneru, vaitonga. Ivo pavakaona mubairo mukana, vakautumira. Pavaida zvipupuriro, vakazvikumbira.
Simba rinotorwa, kwete kupihwa. Chete kuziva kunopihwa. Kana paine chinhu chimwe chete chekudzidza kubva kuTrump neSanders mishandirapamwe, ndizvo izvi. Hapana kana mumwe mune vezvenhau kana vezvematongerwo enyika vakamboda kuti vaviri ava vavhote. Vadzidzi havana hanya - vakatora masimba. Uyezve, veruzhinji vakavaziva ivo.
Mumwe wandinoshanda naye munguva pfupi yapfuura akashoropodza pachena Gary Vaynerchuk pachena. Izvo zvaive zvisina kuvaka, iye anongoda maitiro ake uye meseji yaGary. Kubva paakabvisa pasi posvo, asi ini ndakangowedzera chirevo chimwe chete: Gary Vaynerchuk haana basa nezvaunofunga. Gary haasi kumirira kuzivikanwa nemutungamiriri uyu wemaindasitiri, Gary akazvitora. Uye kuwedzera kwesimba rake nekusimba kwake humbowo hwekuti chiremera chakakodzera.
Saka heano mamwe emazano andinoda kupa vanhu vese vane tarenda uye vakagumbuka:
Iva noudyire - Ini handireve kutora kubva kune vamwe uye handireve kurega kurega kubatsira vamwe. Iwe unofanirwa kuve neinonakidza track track yekuvakira yako masimba pane. Asi iwe unofanirwa kutora nguva kubva kubasa rako, uye woita iyo poindi yekuzvishandira wega. Funga nezvesimba rako ramangwana seakaundi yemudyandigere. Iwe haugone kuenda kunze kwekunge wabayira nhasi. Zvimwe chete nesimba rako. Iwe hausi kuzovaka masimba kunze kwekunge iwe uchinge waisa nguva nesimba mukuita nhasi. Kana iwe uri kushanda 100% yenguva pane wako waunoshandira kana vatengi, hausi kuisa chero chinhu mauri. Usatarisira kuzivikanwa. Enda unoshanda pane yako inotevera kutaura ... kunyangwe kana usati uine vateereri parizvino. Enda unonyora bhuku. Enda utange podcast. Enda unozvipira kuti uve panhare. Enda kusimba chiitiko kuti iwe utaure. Zvino.
Shinga - Kutaurirana kunonetsa, kuiziva kwakakosha. Ini ndinoshandisa zvirevo zvinotsigirwa neruzivo rwangu. Ndinoziva zvandiri kuita uye ndinotaura kudaro. Ini ndinowanzo kuraira misangano (kwete chete nekuti ndinoivenga) nekuti ini handishandise mazwi senge pamwe, Ndofunga, taigona, etc. Handibvise mazwi, handikumbire ruregerero, uye handidzokere shure kana ndadenhwa. Kana mumwe munhu akandidenha, mhinduro yangu iri nyore. Ngatizviongororei. Izvo hazvisi nekuti ini ndinofunga ndinoziva zvese, imhaka yekuti ndine chivimbo mune zvangu ruzivo.
Taura chokwadi - Handifungidzi pane zvandisingazive. Kana ndikapikiswa kana kubvunzwa maonero angu pane chimwe chinhu chandisina chokwadi nacho, ndinoregedza hurukuro kusvika ndaita tsvagiridzo. Unonzwika uine chirevo chakati, "Rega ndimboita tsvagiridzo pamusoro pazvo, ini handizive." kana "Ndine mumwe wandinoshanda naye ane hunyanzvi mune izvo, rega ndimbotarisa naye." pane kuyedza kugumbusa nzira yako kuburikidza nemhinduro kwaunoyedza kurira wakangwara. Iwe hausi kuseka chero munhu kana iwe uchidaro. Kana usiri wechokwadi, zvakafanana zvinoenda… zvibvume uende mberi.
Iva akasiyana - Wese is zvakasiyana. Kuedza kukwana mukati kunozokuita kuti ugone kukwana mukati. Unenge wakahwanda pakati pevamwe vanhu vese vasina masimba uye vasingazivikanwe zvakakukomberedza. Chii chakasiyana newe? Chitarisiko chako here? Kuseka kwako? Zvakaitika kwauri? Chero zvazvingava, tora icho chinyorwa kana iwe uchizviratidza kune vamwe. Handina kureba, ndakakora, ndine vhudzi rakachena ... asi vanhu vanonditeerera.
Iva akangwarira - Mikana yakakukomberedza. Unofanira kugara wakangwarira kwavari. Ini ndinopindura kunenge chinguva chese chikumbiro chakaitwa kwandiri chaicho kuti ndive pane podcast kana kupa chirevo chechinyorwa cheindasitiri. Ini ndinotsvaga mikana pa venhau kukumbira mabasa. Ini ndinotumira makomendi anonetsa zvinyorwa zvandisingabvumirani nazvo kana kupa rinowedzera ruvara kana zvinyorwa zvisina kukwana.
Iva asingatyi - Kuva chiremera hazvireve kuti unofarirwa nemunhu wese. Muchokwadi, nekuzviisa pamberi pevamwe unozonyatso kuve chinangwa chevaya vasingabvumirani. Dai ndaiteerera kune wese munhu asingabvumirani neni hupenyu hwangu hwese, ndingadai ndisina kwandakasvika. Kana ndikaedza kudiwa nemunhu wese, ndaizogamuchirwa muwadhi yepfungwa. Ini ndinowanzo govana nyaya yaAmai vangu chaivo. Pandakatanga bhizinesi rangu, chirevo chake chekutanga chaive chekuti, "Ah Doug, uchawana sei inishuwarenzi yehutano?" Dzimwe nguva unotofanira kuratidza avo vaunoda zvisina kunaka.
Pakupedzisira, kiyi yechiremera ndechekuti iwe uri pane vhiri remangwana rako, kwete chero mumwe munhu. Unonyatsokodzera mvumo yaunotenda kuti unayo… asi haugone kugara pasi womirira vamwe kuti vakuzive kusvikira wautora. Paunenge iwe waita iyo yekudyara, iwe unozozivikanwa. Uye kana iwe uchizivikanwa nevamwe - kana kushoropodzwa - uri munzira yako.
Ini ndakapinda hurukuro kubva kune inoshamisa Ellen Dunnigan (akasimba, Kusimbisa paBhizinesi, akarekodha vhidhiyo pane ino posvo) uye iye akapa akateedzana matipi ezve chiremera chekuvaka. Zvinoda kuti imi mose muve nemaune uye muchidaro munzira yenyu yekuita ose mukana wekuraira chiremera. Ndinokukurudzira zvikuru kuti uteedzere yakasimba yaEllen pane vezvenhau neYouTube, iwe uchadzidza toni! Hira iye akasimba uye iwe uchashandurwa.
Tags: chenjererasimbaonekachiremera chekuvakakusiyanaDonald kwehwamandagary vaynerchukgary veeakatendesekaparuzhinjikutaurakwehwamanda
Kushambadzira Kunoshanda Sei